Dr. Tint Swe's Writings: Butt Better Body အောက်ပိုင်း-နောက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း
ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက် ၃ဝ။ online မှာ တင်ထားတဲ့ (ကန်တော့ပါနော် ဆရာ) ရင်ဆေး၊ တင်ဆေးတွေတွေ့တော့ ဝယ်မယ်စိတ်ကူးသေးတယ်။ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်မှာစိုးလို့ မဝယ်ဖြစ်ပါဘူး။ အခု အရမ်းဝယ်ချင်နေတာက တင်ကိုလိမ်းတဲ့ ဆေးပါရှင်။ အဲ့ဒီဆေးကရော အန္တရာယ်ရှိပါသလား သိပါရစေရှင်။ ဆေးမလူးပဲ တင်ပါးပိုင်းဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ရှိရင်လည်း ကူညီသင်ပြပေးပါရှင်။ မရိုသေလို့ မေးတယ်မထင်စေချင်ပါဘူးဆရာ။ ဆရာက ဗဟုသုတ အတော်ကို ပြည့်စုံလွန်းလို့ မေးမိတာပါ။ ဆရာ့ကျန်းမာချမ်းသာပါစေရှင်။
1. Booty Boot Camp (တီဗွီ) မှန်သားပြင်တွေပေါ်မှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေမြင်ကွင်းထဲက Brazilian beach butt (ဘရာဇီးလ်) ကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းကို နောက်ဖက်ကနေမြင်ကြရတဲ့ အလှကို (ပါဖက်) ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ လူတိုင်းတော့ အဲလိုလှနေအောင် တမင်လုပ်ယူလို့ မရဘူး။ Body type ကိုယ်ခန္ဓာ ပုံပန်းနဲ့ Genetics မွေးရာပါ အခြေအနေတွေက မတူကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပိုလှနေအောင်၊ ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိလာအောင် ပြုပြင်ယူလို့တော့ ရနိုင်ပါတယ်။
2. Behind It All: The Gluteal Muscles ခန္ဓာဗေဒက စရမယ်။ Gluteal Muscles (ဂလူတီရယ်) ကြွက်သားက အခြေခံဖြစ်တယ်။ သူ့မှာ Gluteus maximus, Gluteus medius နဲ့ Gluteus minimus ဆိုတဲ့ အလွှာ သုံးထပ်ရှိတယ်။ ဒါတွေအထက်က (ဖက်) အဆီရှိမယ်။ လမ်းလျှောက်တာ၊ ပြေးလွှားတာ၊ တက်ရ-ဆင်းရတာမှန်သမျှ သူကနေ လုပ်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ (မာဆယ်လ်) တွေကို သန်မာမှုရှိလာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဘို့ကို ဦးတည်စေရမယ်။ ပိုတင်းမာလာစေဘို့ နဲ့ ဝိုင်းစက်လာစေဘို့ ဖြစ်တယ်။
3. Ball Squat နောက်နည်းကွဲတခုက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ ဘောလုံးသုံးရတယ်။ အသေတပ်ထားတဲ့ ဘောလုံးမှာ ကျေား-ခါးမှီထားပြီး ဒူးကိုအသေထား ခြေထောက်တွေက လမ်းလျှောက်သလို လုပ်ပါ။ ဒူးက ခြေရှေ့မှာသာ ရှိပါစေ။ တခါလုပ် ၁၅ ကြိမ်၊ တပတ်မှာ ၃ ခါလုပ်ပါ။
4. Forward Lunge ခြေတလှမ်း ရှေ့ကားထုတ်ပါ။ ဒူးနှစ်ဖက်ကွေးပြီး ကိုယ်ကို အောက်နှိမ့်ချလိုက်ပါ။ ပြန်မတ်ပါ။ ခြေတဖက်ချင်းအဲလိုလုပ်ပါ။ ဒူးကို ၉ဝ ဒီဂရီထက် မပိုစေပါနဲ့။ နောက်ချန်ထားတဲ့ ဒူးက ကြိမ်းပြင်ကို မထိပါစေနဲ့။
5. Backward Lunge နောက်နည်းကွဲတခုက မတ်တပ်ရက်နေပါ။ ခါးထောက်ထားပြီး ဒူးတဖက်ကို မတင်ကွေးပါ။ အဲဒီခြေထောက်ကို နောက်ပြစ်ပါ၊ ကိုယ်ကရှေ့ထွက်လာမယ်။ ကျန်တဲ့ဒူးက ၉ဝ ဒီဂရီအထိကွေးပါ။ နောက်တဖက်ကိုအဲလိူလုပ်ပါ။ Side Lunge နောက်နည်းကွဲတခုက မတ်တပ်ကားရပ်နေပါ။ ဒူးတဖက်ကို ကြမ်းပြင်မှာ မတ်မတ်ကွေးပါ။ ကိုကို ရှေ့နဲနဲကုန်းလိုက်ပါ။ ပခုံးက ဒူးနောက်မှာရှိနေပါစေ။ အလေးချိန်မျှစေအောင် လက်တွေကိုအသုံးချပါ။
6. On the Ball: Leg Lift လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ ဘောလုံးပေါ်မှာ မှောက်ပြီး ကိုယ်ကို ဆန့်တန်းထားပါ။ တတောင့်ဆစ်ကို ကြမ်းပေါ်ထောက်ထားပြီး ဒူးနှစ်ဖက်လုံးကို မ-တင်ပါ။ တင်ပါးကကြွက်သားတွေ တင်းနိုင်သမျှ တင်းထားပါ။ Hip Lift လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ ဘောလုံးပေါ်မှာ မှောက်လိုက်ပါ။ ဒူးတွေကို ၉ဝ ဒီဂရီ ကွေးပါ။ ခြေထောက်ပူးထားပါ။ တင်ပါးကကြွက်သားတွေ တင်းထားပါ။ ဖြေးဖြေးချင်း ပေါင်တွေကို ၂ လက္မလောက်အထိ မ-တင်ပါ။
7. Floor Work: Bridgeကြမ်းခင်းပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ပါ။ ဒူးတွေကွေးထားပါ။ ခြေထောက်တွေကို တင်ပါးနဲ့ အမျှကားထားပါ။ ခါးကို ကြမ်းပြင်ကနေ တဖြေးဖြေးချင်း အောက်ပိုင်းကစပြီး ခွါယူပါ။ ခါးဆစ်တခုချင်းစီဖြစ်ပါစေ။ တင်ပါးကြွက်သားတွေနဲပ ပေါင်ကြွက်သားတွေ တင်းနေပါစေ။ ပခုံးနဲ့ဒူး တတန်းထဲရောက်လာရင် ခဏလေးနားပါ။ နောက် တဖြေးဖြေးချင်းအောက်ချပေးပါ။ ခါးဆစ်တခုချင်းစီဖြစ်ပါစေ။
8. Floor Work: Side Leg Raises ကြမ်းခင်းပေါ်မှာ ဘေးတစောင်း အိပ်ပါ။ အပေါ်ကခြေထောက်ကို မ-တင်ပါ။ တင်ပါးနေရာကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။ ဒူးတွေက ရှေ့မျက်နှာဆီသာဦးတည်ပါ။
9. Floor Work: Dirty Dog ဒူးတွေကို တင်ပါးလောက်ကားထားပါ။ လက်တွေက ပခုံးအောက်မှာထားပြီး လေးဘက်ထောက်နေပါ။ တတောင်ဆစ် ဆန့်တန်းနေပါစေ။ ဗိုက်ကိုတင်းထားပြီး၊ ခါးကို ပုံမှန်သာထားပါ။ မကွေး-မဆန့်ပါနဲ့။ ဒူးတဖက်ချင်း မ-တင်ပေးပါ။ တင်ပါးကို အလိုက်သင့်လှည့်ပေးပါ။
10. Floor Work: Running Plank ဖနောင့်ထောက်ထား၊ ခြေမျက်စိချင်းထိတားပါ။ လက်ဝါးတွေကြမ်းပြင်မှာထားပြီး ခါးကိုဆန့်တန်းထားပါ။ တတောင်ဆစ်ကို ဆန်းထားပါ။ ခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ ခါး၊ တင်၊ ပေါင်၊ ခြေသလုံး အားလုံး တတန်းတည်း ရှိပါစေ။ ခြေတဖက်ချင်း ဒူးကွေး၊ ခြေခြင်း-တ်ကွေးပြီး ဗခါင်ဘက်ဆီရွေ့ပေးပါ။ နောက် နဂိုအနေအထိ ပြန်ဆန့်တန်းပါ။ နောက်တဖက်လည်း အဲဒီအတိုင်းလုပ်ပါ။ လက်ချောင်းတွေ ကားထားပါ။
11. Tone Your Tush With Cardio ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်တဲ့ (ဂျင်မ်) မှာလုပ်နည်း၊ Stair steppers, Arc trainers နဲ့ Elliptical machines စက်တွေသုံးပါ။
12. Slim Your Assets လေ့ကျင့်ခန်းတခုထဲနဲ့ မလုံလောက်ပါ။ စားနေတဲ့အစားအသောက် ဂရုစိုက်ပါ။ (ကလိုရီ) များတာ လျော့ပြစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချပါ။
13. Cosmetic surgeons အလှအပ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကနေ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံ ဥပမာ Heart-shaped အသဲပုံ၊ Pear သစ်တော်သီးပုံ၊ Bubble ဘူဘောင်းပုံ စတာမျိုးဖြစ်အောင် Lifts, and Reshaping ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Implants အတုထည့်တာလဲ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
14. Dress Your Assets Down ကိုယ်နဲ့တော်တာ ရွေးဝတ်တတ်ပါစေ။ Boot-cut and flared jeans အမျိုးအစားဝတ်ရင် နောက်ကကြည့်တော့ တင်းလှပြီး သွယ်လျှတယ်ထင်စေမယ်။ Long pant legs ဝတ်ရင် ပေါင်တံရှည်တယ်။ တင်သေးမယ်ထင်စေမယ်။ Back pockets နောက်အိတ်ပါတာမျိုးကလဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ်။ Super-long back pockets နောက်အိတ်ရှည်ပါတာမျိုးကိုရှောင်ပါ။ Dress Your Assets Up ၁၉၈ဝ ကျော်ကခေတ်စားဘူးခဲ့တဲ့ Peg leg နဲ့ Ankle jeans တွေရှောင်ပါ။ (အိုက်စ်ခရင်မ်) ထိပ်ပိုင်းနဲ့တူတယ်ထင်ကြမယ်။ Super-tight pant legs ဒါမှမဟုတ် leggings along withatight form-fitting rear panel ကိုရွေးဝတ်ရင် Brazilian butt-lift style လို့ သတ်မှတ်တယ်။
15. Squat and Tone ထိုင်ချလေ့ကျင့်ခန်း၊ တကယ်မရှိတဲ့ခုံတခုပေါ်မှာ ထိုင်ချသလိုမျိုး တဖြးဖြေးချင်း တင်ပါးကို အောက်ချပါ။ အနေအထားမှန်ရမယ်။ ခြေနှစ်ဘက်ကို ပခုံးအကျယ်ထား ကားနေပါ။ ထိုင်ချလုပ်နေတုံးဒ ဒူးကိုရှေ့မထုတ်မိပါစေနဲ့။ ကိုယ်ကတင်းနေ၊ ခါးကဖြောင့်နေပါစေ။
16. Aerobic activity (အေရိုးဘစ်) လေ့ကျင့်ခန်းနည်းလုပ်ပါ။
17. Go for Gluteus Maximus စက်ဘီးစီးပါ။
18. Shapewear for Your Tush အခုအခံတွေ သုံးနိုင်တယ်။
19. Walk the Hills တောင်တက်သလို အမြင့်တွေတက်ပါ။
- Butt Better Body အောက်ပိုင်း-နောက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/butt-better-body.html
- Butt exercises for women အောက်ပိုင်း ဖွံ့ထွားလိုလျှင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/butt-exercises-for-women.html